Aqoonkaab Astaamaha Lagu Garto Saaxiibka Runta ah ? | Aqoonkaab
Astaamaha Lagu Garto Saaxiibka Runta ah ?
Jun 20, 2016Arrimaha bulshada
Saaxiibku waa qof inta badan ku lamaan noloshaada, saaxiibtinimadu waa mid ka dhalata is aaminaad laba qof dhex marta, maaha mid ku xidhan da’ ama midab leh, laakiin waa mid astaamo iyo sifooyin u gaar ah leh, kalsoonina meel sare gaadhana dhalisa, laakiin waxa ay su’aali ka taagan tahay waa kuma saaxiibka runta ahi, sifooyinkiisuse waa maxay?
Saxiibka fiican ama runta ahi waa ka maqnaanshihiisu kugu fogaado xitaa haddii uu meel dhow kaaga maqan yahay.
Saxiibka dhabta ahi waa ka saxiibkii dhibta la qaybsada, farxadiisa ka shaqeeya, wanaaga la jecel, magac iyo maqaam sare inuu gaadhana kala shaqeeya.
Saxiibka xaqiiqa ahi waa ka balanta oofiya, wixii saaxiibkii u baahan yahayna uga fikira sida tiisa oo kale, waa ka u dul qaata gafka ka dhaca saaxiibkii, naftiisana uga cudur daara.
Saaxiibku waa ka xanta wanaagsan marka uu maqan yahay ka sheega walaalkii, waa ka qaata waajibkiisa marka uu arko xaalad u baahan inuu gufeeyo.
Akhriste waxa dhici karta in aad wax iska waydiiso sababta mawduucan aanu idiinku soo xulnay? Sababtoo ah? Dhaqan ahaan Somalidu waa dad saaxiibtinimada jecel, laakiin aan wax badan ugu dhaqmin sida ay tahay, waxaana dhici karta in qofku yeesho saaxiibo badan oo dano ama arrimo fud fudud ay isku raaceen, waana xaqiiq in aanu jirin qof aan saxiib lahayn ama ka maarmi karaa.
Haddaba saxiibkaa oo fiicnaada waxa ay wax badan ka badali kartaa noloshaada, halka haddii uu xumaadana saamayn togan uu kaga yeelan karo dhamaan noloshaada oo dhan. Saaxiibada wanaagsani waa kuwa aan ku kala tagin dhibaatada, isla markaana wadaaga farxada iyo wakhtiyada barwaaqada ah, waa kuwa midba midka kale duruuftiisa ka fikira, xaalad kastana isla qaata. Waxa dhacda in laba qof oo saaxiibay yaraantoodu ay nolosha ku wada dhamaystaan iyagoo saaxiibo ah, halka saxiibo badan oo inta aad nooshahay ku soo maraa kaliya ka noqdaan kuwo aad wakhtiyo kooban ku xasuusato. Dadka xidhiidhka aadamiga daraaseeya ayaa baadhitaano badan oo ay sameeyeen ku ogaaday in wakhtiga kalsoonida saaxiibtinimadu ku buuxsantaa yahay muddo todoba sanadood ah, waxaana baadhitaankan lagu ogaaday in dabeecadaha qofku todobadii sanadoodba mar is badasho, laakiin haddii labada qof xidhiidhkoodu dhaafo todoba sanadood waxa hubaal ah in rafiiqnimadoodu raagto wakhti dheerna gaadho.
Previous PostAkhlaaq wanaaga iyo fadliga ay leedahay Next PostAdobe photoshop CC 2015 64/23 bit